Ups Files bvumidzwa kugamuchira Bitcoin nokuda lockers - Blockchain News
Global kutumirwa Zirume Ups ari kutarisa kugamuchira Bitcoin kuburikidza chinhu-Exchange yokuchinjira mbatya kuchikoro basa, richangobva kubudiswa bvumidzwa mafufu anoratidza.
Ups ari kuyeva kwegadziriro yokuchinjira mbatya kuchikoro nemabhangi kuti anogona kutora digitaalinen siyana mubhadharo, maererano kushanda aburitswa U.S. Patent uye vanozivikanwa Office (USPTO) musi weChina. Kuwedzera chinyakare mubhadharo nehurongwa, ari bvumidzwa pakunamata rinoronga Bitcoin somunhu zvichibvira mari kubhadhara pamwe.
The pakunamata inotsanangura nzira renters siyana anogona kubhadharira yokuchinjira mbatya kuchikoro, zvakananga kutaura:
"In muenzaniso embodiments, yokuchinjira mbatya kuchikoro kubhengi zvingasanganisira pfungwa-kubva-sale (Pos) maitiro chokubvuma kubhadharwa vanoshandisa dziri: … Bitcoin; uye / kana (5) zvimwe dzakakodzera mhando muripo. "
mu 2017, kupfuurisa 20 bvumidzwa mafufu aburitswa USPTO vanotaurwa Bitcoin somunhu zvichibvira mubhadharo hurongwa. Nepo nhamba akadonha zvishoma 2016, kupfuurisa 50 bvumidzwa mafufu aburitswa sangano mumakore maviri apfuura vanoratidza mutsetse uyu mafungiro.
Previous Post:Mastercard raMwari CFO: Cryptocurrency kutenga vari boosting redu mutengi mari
Next Post:Blockchain Observatory uye Forum Ichaunza EU kuti "Shongwe" pamusoro Blockchain Tech